Soo dejisan AdwCleaner 6.030 – Vessoft
Antiviruses, Ayna System
Soo dejisan AdwCleaner
AdwCleaner – software ah oo loogu talagalay in lagu raadin iyo uninstall noocyada kala duwan ee adware. software The baaritaanku your computer si aad u ogaato wax kasta oo walxaha khatarta ah iyo bandhigayaa sababtay in u saamaxaaya in ay aqoonsadaan oo uninstall faylasha loo baahdo. AdwCleaner ku ool ah uninstalls commercials, toolbars for web-daalacashada, kordhin aan loo baahnayn ama lagu daro iyo waxyaabaha kale furin. software waa ay awoodaan in ay soo saarto afduubka browser in la beddelo page guriga hadda ama raadin engine of browser oo aan faragelin user ee. AdwCleaner leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Uninstallation of adware
Removal of furin la natiijada shaqadooda
Burburka afduubka browser
Comments on AdwCleaner:
AdwCleaner Software la xiriira:
العربية, English, Español, Português... Kaspersky 2016 16.0.0.614 Internet_multi_device, Total_security, Antivirus...
العربية, English, Français, Español... IObit Malware Fighter 4.3.1.2873
العربية, English, Українська, Français... Autoruns 13.62
English, Français, Español, Deutsch... Opera 40.0.2308.90, 41.0.2353.30 beta iyo 42.0.2374 dev
English, Українська, Français, Español... CheMax 18.7
English, Українська, 中文, Русский... KaraFun Player 2.3